जाडो महिनामा छालामा सङ्क्रमणको जोखिम « Amsanchar
जाडो महिनामा छालामा सङ्क्रमणको जोखिम
चितवन, २० पौष । जाडो महिनामा विशेषगरी छालामा सङ्क्रमणको जोखिम धेरै हुने डाक्टरले बताएका छन् ।
छालामा पानीको मात्रा कमी हुँदा सुक्खा हुने चितवनको भरतपुर अस्पतालका छालारोग विशेषज्ञ डा. प्रशन्न नापेले बताउनुभयो । छालामा हुने सुक्खापनका कारण सोरायसिस, इथायसिसजस्ता रोग तथा सङ्क्रमणका कारण लुतोजस्ता रोग बढी देखिने गरेको छ । चिसोबाट हुने एलर्जीका कारण धेरैलाई हातका औँला, नाक तथा कानमा बढी समस्या हुन्छ । साथै प्रदूषण बढ्ने भएकाले पनि समस्या जटिल बन्न सक्छ ।
चिसोबाट हुने एलर्जीबाट दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले जोगिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सकेसम्म हातमा पञ्जा लगाउने, खुट्टामा मोजासहित जुत्ताको प्रयोग गर्ने, छालालाई सुक्खा हुन नदिने तथा सङ्क्रमण भइहालेमा जथाभाबी औषधि प्रयोग नगरि विशेषज्ञलाई देखाउन उहाँको सुझाव छ । भरतपुर अस्पतालका वरिष्ठ छालारोग विशेषज्ञ डा. शशी हिराचनका अनुसार जाडोमा शरीरलाई चिल्लो पार्न नरिवलको तेल प्रयोग गर्न सकिन्छ । छालामा देखिने पुरानो दाद जस्तो रोगले गम्भीर असर पार्ने भएकाले बेलैमा सचेत बन्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । अरू बेलाभन्दा जाडोमा शरीरको प्रतिरोध क्षमता कमजोर हुन्छ ।
कम घाम लाग्ने र घाम लागे पनि नताप्ने गर्दा शरीरका लागि चाहिने भिटामिन ‘डी’ को पनि कमी हुने भएकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने डाक्टरको सुझाव छ । यो बेला विभिन्न प्रकारका सरुवा तथा नसर्ने रोगका सङ्क्रमण जोखिम धेरै हुन्छ । श्वासप्रश्वाससहित जण्डिस, एलर्जी, नाक बन्द हुनेसहितका दीर्घरोगी समेत बढ्ने गरेका छन् । चिसोमा सामान्यतया रुघाखोकी, निमोनिया जस्ता अरु पनि विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिने भएकाले सावधानी अपनाउन डा. नापेको सुझाव छ । काठमाण्डौ उपत्यकासहित तराईमा चिसो ह्वात्तै बढेको छ । तराईमा हुस्सु र कुहिरोले जनजीवन थप प्रभावित बनेको छ ।
विशेषगरी वृद्धवृद्धा, बालबालिका, दीर्घरोगी, गर्भवती, सुत्केरी बढी प्रभावित भएका छन् । तातो र झोलिलो पदार्थ खाने, न्यानो लगाउने, घाम ताप्ने तथा व्यायाममा पनि ध्यान दिन सके चिसोका कारण हुने विभिन्न रोगबाट जोगिन सकिने डाक्टरको सल्लाह छ । रासस